वर्षौंदेखि कर्पोरेट ब्लगि Aboutको बारेमा के परिवर्तन भएको छ? | Martech Zone
वर्षौंदेखि कर्पोरेट ब्लगिंगको बारेमा के परिवर्तन भएको छ?
बिहीवार, जनवरी 18, 2018 बिहीवार, जनवरी 18, 2018 Douglas Karr
यदि तपाईं मलाई पछिल्लो दशकमा पछ्याउनुभएको छ, तपाईंलाई थाहा छ कि मैले लेखेका थिए डमीहरूको लागि कर्पोरेट ब्लगि। २०१० मा फिर्ता व्यवसाय र उपभोक्ताहरू अझै राम्रा जानकारीको लागि भोकाएका छन्, र तपाईंको कम्पनीले खोजिरहेका स्रोत हुन सक्छन्।
त्यसोभए कर्पोरेट ब्लगिंगको साथ के परिवर्तन भएको छ?
प्रतियोगिता - वस्तुतः प्रत्येक कम्पनीले कर्पोरेट ब्लग सुरू गर्नाले, तपाईको भीडमा आवाज सुन्ने सम्भावना स्लिम छ ... जब सम्म तपाई उल्लेखनीय कुरा पोष्ट गर्नुहुन्न। Blog बर्ष पहिले ब्लग पोष्टहरु केहि सय शब्दहरु थिए र सायद एक धेरै सानो छवि थियो। आजकल, भिडियो र इमेजरी लिखित सामग्रीमा हावी छन्। सामग्री राम्रोसँग अनुसन्धान गरिनु पर्छ र कुनै प्रतिस्पर्धी भन्दा राम्रो लेख्नु पर्छ यदि तपाईं यसलाई सान्दर्भिक यातायात र रूपान्तरण आकर्षित गर्न को लागी आशा गर्नुहुन्छ।
Frequency - उपभोक्ताहरू र व्यवसायहरू सबै एकै गरी टाई। गर्दै छन्, त्यहाँ धेरै अत्यन्त धेरै सामग्री उत्पादन भइरहेको छ र यो खपत भइरहेको छैन। हामी ब्लगिंग फ्रिक्वेन्सीलाई मौकाको खेलको रूपमा हेर्छौं - प्रत्येक पोष्टले तपाईंको सामग्री फेला पर्नेछ, हेरेको, साझा गरेको, र त्यसमा स engaged्लग्न हुने सम्भावना बढायो। आजकल, हामी विकास गर्दछौं सामग्री पुस्तकालयहरु। यो रिसन्सी र फ्रिक्वेन्सीको बारेमा अब छैन, यो तपाइँको प्रतिस्पर्धी भन्दा धेरै राम्रो लेख बनाउने बारेमा हो।
मिडिया - वर्डकाउन्टको साथसाथै सामग्रीको हेराइ नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। असीमित ब्यान्डविथ र स्ट्रिमि options विकल्पहरूले पोडकास्ट र भिडियोहरू स्मार्टफोनको जो कोहीको हातमा राख्दै छन्। हामी सही माध्यमहरूमा पुग्न प्रत्येक माध्यमको माध्यमबाट अपवाद सामग्री लाई वितरण गर्ने प्रयास गर्छौं।
मोबाइल - हाम्रो उद्यम B2B ग्राहकहरूको साथ पनि, हामी हाम्रो ग्राहकहरूको साइटहरू मार्फत मोबाइल पाठकहरूको सामूहिक रूपमा अवलोकन गरिरहेका छौं। एक छिटो, उत्तरदायी, र संलग्न मोबाइल उपस्थिति अब लामो र विकल्प छैन।
वेबसाइट बिल्डरले यो अद्भुत इन्फोग्राफिक, विकास गरेको हो राज्य ब्लगिंग उद्योग र कसरी एक ब्लग सिर्जना गर्न को लागी परम शुरुआत गाइड जसले हामीलाई इन्फोग्राफिकमा कर्पोरेट ब्लगि reader प्लेटफर्महरू, पाठक जनसांख्यिकी, पाठक व्यवहार, लेख्ने सुझावहरू, सामाजिक साझेदारी, र ड्राइभि convers रूपान्तरण मार्फत हिँड्छ।
टैग: 2017ब्लगिंगकर्पोरेट ब्लगिसामाजिक मिडिया साझेदारीब्लगिंग को राज्यवेबसाइट निर्माणकर्ता
के त्यहाँ नयाँ सामाजिक नेटवर्क सुरू गर्न अझ राम्रो समय छ?
कसरी बिक्री र मार्केटिंग पign्क्तिले ड्राइभहरू राम्रो B2B परिणाम लिंक्डइनमा